Shina: Fahatsiarovana an’ilay poety Adaladala teraka taorian’ny taona 80, Xiao Zhao · Global Voices teny Malagasy
Shina: Fahatsiarovana an'ilay poety Adaladala teraka taorian'ny taona 80, Xiao Zhao
Voadika ny 07 Marsa 2011 4:35 GMT
Tamin'ny 14 Febroary 2011, ilay poety Xiao Zhao 25 taona dia namono tena tamin'ny fitsambikinana teo ambonin'ny tetezana akaiky ny tranony ao amin'ny farintanin'i Hunan. Raha nisarika ny sain'izao tontolo ilay olo-malaza Han Han teraka taorian'ny taona 80 ka nanjary iray tamin'ireo ” 50 be mpakafy indrindra eran-tany tamin'ny 2010″, ny andro fohy niainan'i Xiao Zhao dia manambara ny tsy fitovian'ny tantaran'ireo iray andiany ao Shina.
Ny sanganasany farany dia tantara noforonina momba ny tantaram-piainana an-tserasera , Mbola tsy nampiasaina: fiainana manampahaizana mpialokaloka tao amin'ity firenena ity amin'izao fiainana izao永不磨损：一个流浪知识分子此国此世的闻历见思）, navoaka voalohany tao amin'ny KDnet tamin'ny Desembra 2010. Indreto sombiny tamin'ny asa-sorany izay miresaka an'ireo teraka taorian'ny taona 80 tany ambanivohitra:
对于广大的生于80年代、生活于小城小镇甚至乡村的人来说，面临的困境基本相似：县级的图书馆中，除了武侠小说之外，很难找到一本封底标价超过5毛的书。 纸张暗黄，像是多年以前擦过屁股，有些还粘着某种来历不明疑似鼻涕的东西；随手一翻，尘封多年的烟灰直扑鼻子，其内容不提也罢。新华书店，一半以上是教 辅。音像店不少，勉强能听的只有老狼。互联网尚未兴起，网上浏览信息还属于将来时。更何况，这些还得在无休无止索然乏味的功课的夹缝中进行。基于以上的原 因，我以为，不应对这一代人过于苛责：那些勇于进取的青蛙们，不是不想看到更多的天空，而是你给的井口只有这么宽。而爬出井口，需要漫长的努力和时间。
Ho an'ireo teraka tamin'ny taona 1980 tao tanàn-dehibe antonotonony na tany amin'ny tontolo ambanivohitra, dia mitovy ny zava-niainantsika : ao amin'ny tranombokim-paritra, ankoatra ny boky tantara foronin'i wuxia, dia tsy mahita boky mihoatra ny 50 cents ny vidiny mihitsy isika. Ny pejy miloko mavo dia toy ny namboarina ho taratasy fifirana, toy ny lelo ny akora hitanao miraikitra amin'ny pejy sasantsasany . Raha mamadibadika ny boky ianao, dia manidina eny amin'ny oronao ny vovoka. Tsy misy mendrika asongadina izay ao anatiny . Ao amin'ny tranombokin'i Xinhua indray, dia maherin'ny antsasaky ny boky dia boky fianarana avokoa . Mety mahita mpivarotra kapila mangilatra koa isika saingy ny ankamaroany dia tsy mendrika hohenoina intsony, ankoatra ny hiran'i Lao Lang. Tsy mbola nalaza ny aterineto tamin'izany, mbola fiainan'ny hoavy ny fiseraserana amin'ny aterineto. Sady mankaleo no mankarary an-doha ny enti-mody. Noho izany tranga izany, dia tsy tokony ho sarotiny amin'izao taranaka ankehitriny izao ny olona. Tsy maintsy hijery izao tontolo izao ireo sahona matanjaka ao anaty fatsakàna, fa terenareo ho kely ny lalam-pandosirany. Mandany fotoana sy hery tokoa ho azy ireo ny mianika fatsakàna .
Na dia fahavoazana ho azy aza ny maha avy any ambanivohitra azy, dia tafiditra tao amin'ny Anjerimanontolo Fampanarana ao Nanjing, iray amin'ireo Oniversité tsara indrindra ao Shina ihany izy. Nahafahany nisondro-tsaranga toerana azony izany, saingy, nanapa-kevitra handao ny fianarany izy ny taona 2005 . Nanao fanambarana ny fanapaha-keviny izy:
首先我想说的是，这游戏我玩了十二年，倘若由着惯性或惯例，做一天和尚撞一天钟，当一天婊子接一天客，—— 得过且过，那么，我还得玩四年。如果“表现够好”，“正是你们想培养的人材”，没准，四年后还得玩下去。没准，还会和你们一样，站在讲台上恬不知耻地说一 些连自己也骗不了的傻话，误人子弟还收钱。除此之外，每年定期不定期人模狗样地参加一系列以“学术”冠名的大会小会，辩论议论争论讨论，和颜悦色勾心斗 角，出书，抄袭，造假，表演，作戏，——只要足够不要脸，保不定混成个“大师”。就说咱这专业吧，谁敢说没蒙过人，屁股干净？但，现在兄弟我不想玩了。
12 taona no nilalaovako azy ity. Manaraka ireo fironana sy fahazarana, ao anatin'ny efa-taona manaraka, dia nanery tena hiaina ho tahaka ny moanina, mampaneno lakolosy isan'andro, na toy ny mpivaro-tena, manao izay mahafa-po ireo olona isan'andro. Raha tsara ny zavatra vitako ary ” lasa ilay vato nasondrotry ny tany izay notadiavinao hokolokoloina”, tsy maintsy notohizako ny lalao efa-taona taoriana. Angamba mety ho isan'ny iray aminareo aho, mijoro eo amin'ny sehatra, tsy menatra ny mamaky lainga tsy hinoanao ary manadala ny zanaka lahy sy ny zanaka vavin'olona mba hangalàna vola. Ankoatra izay, dia mety handray anjara amin'ireo karazana fivoriana “akademika” aho, mandresy lahatra, miady hevitra sy miresadresaka, miady amin'ny hafa amin'ny tarehy feno tsikitsiky. Mety mahavoaka boky, nalaina tahaka sy namboarina nanatsara sy nikatroka. Mety afa-miaina tsy mahalala menatra aho, za, angamba mety ho lasa “maître” aho. Ao amin'ny departemantanay, iza no madio fitombenana tsy manambaka ny hafa? Saingy ry rahalahy, tsy te hilalao intsony aho.
Angamba te-hanavotra ny tenany izy amin'ilay lazainy hoe “rafi-panimbana ati-doha” izay nomarihany tao amin'ny hafany farany tao KDnet tamin'ny 14 Desembra 2010, roa volana nialoha ny namonoany tena:
Sahiko ny manao tsoa-kevitra fa : Tsy very talenta ity firenena ity, ny olana lehibe dia ilay rafitra manimba ati-doha. Sahiko koa ny midradradradra fa: tsy mijanona eo amin'ny rafitra ny olana lalina, fa amin'ny karazana foko [karazan'olona] manokana. Eo ambanin'ny fahefan'ny olombelona sasany manana QI [fari-pahaizana] isa zero ity fiarahamonina ity.
Xiao Zhao dia ao anatin'ny andia poetika nisongadina vao haingana Laji (垃圾派) , midika hoe “fomba fanoratra adaladala”. Araka ny fihaonam-be tamin'ny 2009 momba ny Asa-soratra Adaladala, ny famaritana azy dia:
Manarafesina ny tena sy manimba ny fanahy ny asa-soratra Adaladala. Mamerina ny tena amin'ny fiainana andavan'andro mba hamorona indray sy hahita ny hiatrika ny fiainana amim-pahasahiana. Ary koa mamorona tontolo vaovao ho an'ny tononkalo.
Tamin'ny volana Aogositra 2010, dia namoaka an-dalana 20 Fanambarana Asa-soratra Adaladala 2010 i Xiao Zhao , indreto sasany nosafidiana manokana amin'ireo fandikàna nataony
3. Amin'izao andro iainan-tsika izao, nanjary niova ho Adaladala ny tononkalo, ary ny satan'ireo poety dia lasa mitovy amin'ireo mpitsimpona fako mba hivelomana.
4. Tamin'ny 5 Febroary 2009, artista mahay no nihinana sakafo makandoa [fivalanana], ary avy eo nanoratra voambolana 10 misy [fivalanana] izy: “Misafidy ny hanana fahefana sahisahy ianao fa izaho kosa misafidy ny hihinana diky”. Ampitahao an'ity anie, ity lazaina hoe asa-soratra Adalalan'i Xu Xianchou ity dia fialan'aina tsy misy fanaintainana , na koa hoe misentosento tsy amim-piraisana ara-nofo.
6. Ny Adaladala-isma dia famoronana , faritany, saha, saina fotsiny ihany. Tsara ho ahy ny mody miseho mahafinaritra mba tsy anaovanao izany koa.
14.Adaladala aho, izany no mahatsara ahy. Adaladala aho, izany no hanajana ahy. Adaladala aho, izany no maha marina ahy. Adaladala aho, izany no mahatonga ahy handinika.
Ity ambany ity ny tononkalo fanta-daza indrindra an'i Xiao Zhao, efa akaiky ahy ny faniriko（《我的希望在路上》）, nosoratana ny 30 martsa 2009:
dia mandeha eny amin'ny arabe malalaka
Tsy misy fiafarany, na tanjona na zotra
Eo ambanin'ny hazo paoma mandravina
misy tovovavy manirery miandry ahy
Hamihina ny tanako izy ka mba hiaraka handeha amiko
Ho any amin'ny tanàna manaraka
Tanàna izay tsy misy olo -kafa